Calcite sy Aragonite ao amin'ny fiaramanidina karbaonin'ny tany
Science Karazana vato
Azonao atao ny mihevitra fa ny karbaona dia singa iray izay hita amin'ny zavamananaina indrindra amin'ny tany (indrindra amin'ny zavamaniry) na ao anaty rivotra toy ny gazy karbonika. Samy zava-dehibe avokoa ireo tahirin-javakavy roa ireo, saingy ny ankamaroan'ny karbaona dia mihidy amin'ny mineraly karbona . Izy ireo dia tarihin'ny karôzôma kalesy, izay mitaky karazana mineraly roa antsoina hoe calcite sy aragonite.
Ny aragonite sy ny calcite dia mitovy amin'ny karazana simika mitovy, CaCO 3 , fa ny atôma dia mifototra amin'ny endrika samihafa.
Izany hoe, polymorphs izy ireo . (Ny ohatra iray hafa dia ny trio amin'ny kyanite, andalusite sy sillimanite.) Ny aragonite dia manana rafitra orthorhombic sy kalkita ny rafitra trigonaly (ny tranokalan'i Mindat dia afaka manampy anao hamantatra izany ho an'ny aragonite sy ny kalsita). Ny garabolan'ny mineraly karbôna dia mirakitra ny fototry ny mineraly roa avy amin'ny fomba fijerin'ny rockhound: ny fomba hamantarana azy ireo, izay ahitana azy ireo, ny sasany amin'ireo sehatra ireo.
Ny kalcite dia mendri-kaja kokoa amin'ny ankapobeny noho ny aragonite, na dia mihodina amin'ny iray hafa ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny faneriterena. Amin'ny toe-java-miafina, ny aragonite dia mivadika ho kalsita amin'ny vanim-potoana ara-jeolojia, saingy amin'ny fanerena avo lenta aragonite, ny mpihinan'ireto roa ireto no rafitra tiany indrindra. Ny hafanana ambony dia miasa amin'ny fankasitrahana amin'ny kalsita. Amin'ny fanerena eo ambony, ny aragonite dia tsy mahazaka maharitra mihoatra ny 400 ° C mandritra ny fotoana maharitra.
Ny fiasa mahery vaika sy ny toetr'andro ambany amin'ny endriky ny metamorphic blueschist dia matetika misy venez aragonite fa tsy kalcite.
Ny dingan'ny fiverenana indray amin'ny kalsita dia mihelina fa ny aragonite dia mety hijanona ao amin'ny fanjakana metastable, mitovy amin'ny diamondra .
Indraindray dia misy kristaly iray mineraly mivadika ho an'ny mineraly hafa ary miaro ny endrika tany am-boalohany ho toy ny pseudomorph: mety ho toy ny bokotra kalkitika na aragonite izy io, fa ny mikraoskaopy petrographic dia mampiseho ny tena izy.
Maro ireo geologists, ho an'ny ankamaroan'ny tanjona, tsy mila mahafantatra ny polymorph marina ary miresaka fotsiny momba ny "carbonate." Ny ankamaroan'ny fotoana dia ny karbônina ny karbôna.
Karazam-bozaka vita amin'ny kalsiata
Ny siramamy karbônina karbônate dia sarotra kokoa raha ny fahatakarana ny hoe ny polymorph dia hivoaka tsy ho vahaolana. Mazava ho azy izany dingana izany, satria tsy misy loatra ny mineraly be loatra, ary ny fisian'ny gazy karbônika (CO 2 ) misolo tena ao anaty rano dia manosika azy ireo hikorontana. Ao anaty rano, ny CO 2 dia mifandanja amin'ny bikarbonate ion, HCO 3 + , ary asidra karbonika, H 2 CO 3 , izay rehetra tsy misy loto. Ny fiovaovan'ny CO 2 dia misy fiantraikany eo amin'ny ambaratonga hafa, fa ny CaCO 3 eo afovoan-tsokosoko dia tsy manan-tsafidy afa-tsy ny fikojakojy toy ny mineraly izay tsy afaka mamongotra haingana ary miverina ao anaty rano. Ity fizotra iray ity dia mpamily goavam-be amin'ny fiaramanidina karbaona.
Ny fandrakofana ny ion-kalsioma (Ca 2+ ) sy ny ion carbonate (CO 3 2- ) dia hifidy raha tafiditra ao amin'ny CaCO 3 izy ireo dia miankina amin'ny fepetra ao anaty rano. Ao amin'ny rano madio (sy ao amin'ny laboratoara), ny kalcite dia mitoetra, indrindra amin'ny rano mangatsiaka. Ny endriky ny cavestone dia amin'ny ankapobeny.
Ireo vatoaratra mineraly amin'ny vatosokay maro sy vato hafa sedimentary dia amin'ny ankapobeny.
Ny ranomasimbe no toerana tena manan-danja indrindra ao amin'ny firaketana ara-jeolojia, ary ny fitrandrahana karôzôma dia ampahany manan-danja amin'ny fiainana an-dranomasina sy ny geochemistry an-dranomasina. Ny karôzôma kalzôma dia mivadika avy hatrany amin'ny vahaolana mba hamorona laka-mineraly eo amin'ny boribory kely boribory antsoina hoe ooids ary mamorona ny simenan'ny fotaka amoron-dranomasina. Ny vatosoa misy vatosoa, kalsita na aragonite, dia miankina amin'ny simia momba ny rano.
Ny ranomasina dia feno ions izay mifaninana amin'ny calcium sy carbonate. Ny Magnesium (Mg 2+ ) dia mihodina amin'ny rafitra kalkita, mampitombo ny fitomboan'ny kalsita ary manery ny molekiolan'ny molekiola, saingy tsy manelingelina ny aragonite izany. Ny sulfate (SO 4 - ) koa dia manakana ny fitombon'ny kalsita. Ny rano mangatsiaka sy ny famatsiana karôlôba misimisy kokoa dia manohana ny aragonite amin'ny famporisihana azy hivoatra haingana kokoa noho ny calcite can.
Calcite sy Aragonese Seas
Ireo zavatra ireo dia mahakasika ireo zavamananaina izay manangana ny kibony sy ny rafitra avy amin'ny karoty karbona. Ny mofomamy, anisan'izany ny fivalozana sy brachiopods, dia ohatra mahazatra. Ny vatosoa dia tsy mineraly madio, fa ny kôkôma mahavelona amin'ny karazam-boankazo mikrôbôka izay mifamatotra amin'ny proteinina. Ny biby iray sy ny zavamaniry voafantina toy ny plankton dia manao toy izany koa ny kirany, na ny fitsapana. Ny zava-dehibe iray hafa dia toa ny algô dia mandray soa avy amin'ny fanaovana karôtatea amin'ny fiantohana ny tenany amin'ny famokarana CO 2 ho an'ny fanampiana amin'ny photosynthesis.
Ireo zavaboary ireo dia mampiasa enzymes hanamboarana ny mineraly tiany. Ny Aragonite dia manao kristaly tsy misy ilana azy, fa ny calcite kosa mahatonga ny sakana, saingy maro ny karazana azo ampiasaina. Maro ireo akorandriaka mollusk no mampiasa aragonite ao anaty ary kalsita eny ivelany. Na inona na inona ataon'izy ireo dia mampiasa angovo izy, ary raha mahazo tombony amin'ny karazam-bozaka na ny iray hafa, ny fiasa fananganana shell dia mitaky herinaratra fanampiny mba hiadiana amin'ny didim-pitondran-tena madio.
Midika izany fa ny fanovana ny simia amin'ny farihy na ranomasimbe dia manameloka karazana sy tombontsoa sasany. Nandritra ny vanim-potoana ara-jeolojia dia nivadika teo anelanelan'ny "aragonite seas" sy ny "ranomasina kalsitika" ny ranomasina. Amin'izao andro iainantsika izao dia any amin'ny ranomasina aragonita iray avo be ao amin'ny magnesium-io dia manosika ny halavan'ny aragonite plus calcite izay avo be ao amin'ny magnesium. Ny ranomasina kalciter, ambany ambany amin'ny magnesium, dia manome tombony ho an'ny calcite ambany-magnesium.
Ny tsiambaratelo dia basalta vaovao, izay ny mineraly dia mihetsika amin'ny magnesium any anaty ranomasina ary mampiato azy tsy hivezivezy.
Rehefa miezaka mafy ny asan'ny tarika tektonika, dia mahazo ranomasina kalsitika isika. Rehefa mihamitombo sy mihamafana ny faritra, dia mahazo ranomasina aragonite izahay. Mihoatra lavitra noho izany, mazava ho azy. Ny zavatra manan-danja dia ny fisian'ny fitondrana roa samihafa, ary ny sisintany eo anelanelan'izy ireo dia avo roa heny ny magnesium raha oharina amin'ny kaleta amin'ny ranomasina.
Ny Tany dia nanana ranomasina aragonita efa ho 40 tapitrisa taona lasa izay (40 Ma). Ny vanim-potoanan'ny ranomasina aragonita teo aloha dia teo anelanelan'ny faramparan'ny Mississippi sy ny fotoan'ny Jurassic tany aloha (330 ka hatramin'ny 180 Ma), ary manaraka ny fotoana manaraka dia ny Precambrian farany, talohan'ny 550 Ma. Teo anelanelan'ireny vanim-potoana ireny, nanamorona ranomasina ny tany. Ny aragonite sy ny calcite maromaro dia naparitaka any aoriana kokoa.
Heverina fa nandritra ny vanim-potoana ara-jeolojia, ireo endrika goavam-be ireo dia nampiavaka ny fifangaroan'ny zavamaniry izay nanamboatra vatohara tany an-dranomasina. Ny zavatra ianarantsika momba ny fitrandrahana karibenina sy ny valinteny nomeny momba ny simia momba ny ranomasina dia manan-danja hahafantarana koa rehefa miezaka mamantatra ny fomba hamalian'ny ranomasina ny fiovan'ny ranomasina amin'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny toetr'andro.
Mianara momba ny volkano volkano (vato manjavozavo mahery vaika)
Fomba fisainana vatolampy amin'ny alalan'ny diagrams
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny Sandstone
Fantaro ny tontolon'ny vato madinika
Minerals of the Surface of the Earth
Understanding Granite Commercial
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny haram-bato
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny arabe
Izay Ilainao Mahalalana Alohan'ny Hividiananao Kolikoly Vita
Inona no mahatonga ny metamorphic vato ho toy ny tokana?
Tricks 3 hamaritana ny tonon'ilay mpanoratra
Ady an-dakilasy sy ady
Quintus Sertorius no mpitarika ny Lusitaniana
Ireo haino aman-jery Kanadiana 80 mahavariana izay nanapaka ny sarintany irery ihany tany Kanada
Afrika sy ny Commonwealth of Nations
Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny finoa
Top 10 Mammals
Soso-kevitra momba ny tetikasa: Fitoerana ortodoksa mihidy
Mpihira David Lee Roth sy ny Tantara Skyscraper Real
Vehivavy marefo Eoropeana mahagaga
Manaova ny alahelonao: Wann, wann, Als
Fihetseham-po ho an'ny Golf Gaza
Nahoana ny Metaly Tetezamita no antsoina hoe metaly tetezamita?
Trano mivantana - Soso-kevitra ho an'ny Lalao Bebe kokoa
Taratasy Misokatra ho an'i Jason Morales avy amin'ny Dadany
Inona no sanda tsara momba ny fitiliana SAT eo amin'ny 2018?
Stats and Acronyms NHL
Ny Zodiac mifandray amin'ny Vatana
Vavaka ho an'ny hery anaty tamin'ny horohoron-tany
IEP - Fanoratana ny IEP